Dad shalay lagu dilay deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeelaha Dhexe – STAR FM SOMALIA
Dadka dhintey ayaa la sheegay in ay ku jireen haween iyadoo sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah labo ka mid ah dadka la diley ayaa ka soo jeeda qoys kaliya.
Dilka dadkan ayaa yimid kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay xoolo dhaqato iyo beeralay wada degen deegaanka Xawaadley. Khilaafka ku dhex mara beeralayda iyo xoolo dhaqatada deegaano ka mid ah gobolka Sh/dhexe ayaa ah kuwo soo noqnoqda.
Kusimaha guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa gaaray deegaankaas xalay iyagoo la kulmay oday dhaqameedyo ka soo jeeda labada beel ee khilaafku soo kala dhex galay.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in haatan xaaladu degen tahay isla markaana oday dhaqameedyada iyo waxgaradka ku nool deegaanka Xawaadley ay wadaan dadaalo ay ku doonayaan in ay ku xaliyaan khilaafyada soo noqnoqda ee ka dhex dhaca beeralayda iyo xoolo dhaqatada.